GHARRI COMMUNITY INC.
WACHILLE Home Page
BBCNewsAfrica To Read Gharri History & Profile Click Here
Caruurta Garre (Gharri):
Garre (Gharri) wuxuu dhalley laba wil. Mid waxaa la dhahiin jiray tuf midka kale waxaa la dhihi jirey Maxaamed. Maxaamed waa wilka uu wayn. Ilmaha Garre. Maxaamed marku dhaley wilka layiirado quraan aayu dhintay. quraan waxaa soo koriyey adderkiisa Tuf. Quraan ;markuu waynadey wuuxu gursadey gebedhii adeerkiisa Mako Tuf. Quraan wuuxu dhaley laba will oo layiirado Assarre iyo Furkushe. Tuf wuxuu dhalley laba wiil oo la kala yiraahdo Cali iyo Adolle
Garre yaa dhalay? Garre waxaa dhaley Samalle.
Samale wuxuu dhaley sagal wiil oo kala ah
Gharri ;Samale Gharri samle laba qole ayuu ukala baxa
Gharr dheera samale 4 qole ayuu ukala baxa
Gharri Somali (Gharri Konfur)
Gharri Somali wuxuu ka mid yahay qabailka ugu soo horeeyey ee soomaliya soodegey. Wuxuu degganyahay qiyaastii 1500. Gharri wuxuu galaya asalhaan Samaale. Waxaa layiraahda Gharri Samaale. Mesha ugu horeeysey ee uu soodegey waxaa ahayd meesha lagu magacaabo ceelasha waanbate ee ku taala waqooyiga W/Weyn, gobolka Sh/hoose.
Siday taarikhdu sheegayso, waxaay ahaayeen dadki ugu horeeyey ee arkey dhoobooy. Iyo laadegey sh/hoose. Waxaay ahayeen Geel, sidakale, waxaay ahayeen, dadkii ugu horeeyey magaalada Braawe degay.
Gharri wuxu dega Gobalada kala ah Sh/hoose iyo Bay. Degmoyinka uu degana wai.: Awdheegle, Qoriyoleey, Afgooye, W/Weyn, Hurtun Waarrey, Buur Hakaba, iyo Dhinsoor.
Dhaqaalahan, Gharri wuxaa saldhig u ah xoolaha iyo berrah. Ganacsina waa jira dhaqan ahaanna. Dhaqanka Gharri wuxuu ku saleesan yahay diinta islaamka. Xaaladda xukunkana asaga ayaa is xukuma. Cid kale ma xukunto.
Tarriqda Gharri (Garre Kofar)
Gharri (Garre) wuxuu leeyahay af u gaar ah. Maxaa yeeley Gharri waa qabiil weyn, ooleh dhul weyn. Wuxuu awood u yeeshey in uu dhooro luqadiisa iyo dhaqankiisaba sida qabiilada waa weyn ee aduunka kajira. Xiriirka Gharri(Garre) uu la leyahay dadka la deggan aad ayuu u fiicanyahay. Dhaqan ahaan, bulsho ahan iyo nabad gelyo ahaanba.
Gharri wuxuu leeyahay hoggaamiyayaal dhaqmed oo wa-wanaagsan, Sida
Ø 1. Malaaq Cabdi oo Gharri (Gaare) hoggaaminaayey muddo 70 sanaha. Guulo baddana u horseedey. Dhul fara baddanna u furey.
Ø 2.Macalin Aadan Cismaanoow, oo ahaa ninkii Gharri (Garre) kabad baadiyey kolanyadii gumeeysigii taliyaaniga kana mid ahaa madaxdii la geeyey Barliin 1780.
Ø 3. Maxaad Cabdiyoow Sanlaawe, oo ahaa ninkii wiilkiisa u qaatey dhul Gharri (Garre) yeelanaya. Wuxuuna ku dhintey xabsiga gumeeysiga Taliyaaniga, assagoo Garre u halgamaya.
Ø 4. Beed dheere,
Ø 5. Faroole, iyo
Ø 6. Baroole, oo ka mid ahaa iyagana madaxda Gharri oo door fiican ka qaatey hoggaaminta Garre.
Gharri wuu leeyahay sheekooyi, iyo maah maah iyo gabays fara badan, sheekooyinka waxaa looyaqaana (Maano-Maano) waxaa ka mid ah sheekadi haawaadoweey absho waraabe-maah maahda waxaa kamid ah (lan hun wusku halleeyaay:- laan hunna wuskul ko’taay).
Kedi Guuraay:-waa waxjira. Waa waagii uu Gharri (Garre) jabay. Waxuuna u kala baxay afar (4) qeebood.
Ø A. Qeeb u soo guurtey Kofar
Ø B. Qeeb u guurtey Jaad.
Ø C. Qeeb u ku hartey Gedo oo u guurtey hagga Itobiya iyo Kenya.
Ø D. Qeeb laqabsadey oo beddelmey oo gaaloobay sida Gabra oo kale.
Buulo Xusseen: waa ninkii Garre hoggaminayey markii kedi guuray dhacaysey. Waa ninkii sosahmiyey koofar. Waxuuna ku taliyey in koofar loo guuro. Inta taladiisa raacday koofar baay u soo guurtey. Buule Xusseen markuu soo sahmiyey Koofar wuxuu yiri, waxaan soo arkey dhul rag u roon, oo geel u daran. Markuu Gedo ka soo guuraayey wuxuu yiri:-Gedooy, waan kaa soo guuray, waxaana kaaga guurey seddax shay sababtood.
Ø 1. Falaartii yaabiye
Ø 2. Fitnadii Kedeble iyo
Ø 3. Farastii dhukaneed.
4. farmuuq birkaaye
Baajuun ama Baanjuul,waa qabil soomaaliah. Waxaa degaan Kismaayo iyo Jasiiradaha Juulen Jawaay. Dad badan Gharri (Garra ah) ayaa katirsan. Iyaga naftoodan waxaa kamid ah qaar aminsan Gharri (Garre nimo.)